‘वैंकहरुले व्याज थोरै दिएकोले शेयर बजार प्रतिको आकर्षण बढ्यो’
जनतापाटी बिहीबार, फागुन ६, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडाैँ । केहिदिन देखि पूंजी बजार निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । यस्ले गर्दा केही मानिसहरु हौसिएको देखिन्छ भने केही मानिसहरु भने कुनै पनि बेला क्र्यास हुन सक्ने भयमा देखिन्छन् । वास्तविकता के हो ? पूंंजी बजारका जानकार तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगतको क्यापिटल मार्केट फोरमका संयोजक अम्बिका प्रसाद पौडेलसंग गरिएको कुराकानीको सारः
पूंजी बजारमा अहिले निकै उछाल आइरहेको छ, यसको पछाडिको मुख्य कारण के हो ?
-यसमा ३,४ वटा मुख्य कारण छन् । एउटा मुख्य कारण त नेपालका वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुन् । उनीहरुले आफ्न ग्राहकलाई बचत तथा मुद्धती खातामा जम्मा गर्दा दिइने व्याजमा संकुचन ल्याए, घटाए । वैंकमा बचत वा मुद्धती खातामा पैसा जम्मा गरेर आउने व्याज भन्दा शेयरमा लगानी गरेर आउने आम्दानी धेरै हुने भएपछि मानिसहरु स्वतः पूंजी बजारतर्फ आकर्षित भए ।
अर्काेतर्फ कोरोना महामारीको कारण लगानीका धेरै क्षेत्रहरुमा संकुचन आयो । अरु तिरका व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने, संचालनमा आएका व्यापार व्यवसायमा पनि नाफामा जाने अवस्था नआएपछि मानिसहरु शेयरमा लगानी गर्न आकर्षित भए । त्यहीकारण नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरिकै शेयर बजारमा अहिले उछाल आइरहेको छ । मानिसहरुले सोचेंभन्दा द्रुत गतिले शेयर बजार बढिरहेको छ । त्यसको मनोवैज्ञानिक असर हाम्रो पूंजी बजारमा पनि पर्नु स्वभाविक हो । भारतमा बढिरहेको छ, एशियाली, जापनीजि, युरोपेली, अमेरिकन सबैतिरको शेयर सूचकांक बढिरहेपछि नेपाली लगानीकर्तामा पनि त्यसको मनोवैज्ञानिक असर पर्नु त स्वभाविक भैहाल्यो । पूंजी बजारमा भैरहेका सुधारका कामहरुले पनि मानिसहरुमा यसतर्फ बढिरहेको छ ।
पूंजी बजारमा भैरहेका सुधारका कामहरुका कारण यसतर्फ आकर्षण बढेको भन्नुभयो, त्यति धेरै मानिसहरु आकर्षित हुने गरि के के सुधारका कामहरु भैरहेका छन् ?
-मुख्य कुरा यसको प्रविधि हो । हिजोका दिनमा सिमित संख्यामा कारोबार हुन्थ्यो । दलालहरु सिमित थिए, कारोबार काठमाण्डौबाट मात्रै गर्नु पर्ने वाध्यता थियो । तर, अहिले अनलाइन प्रविधिको कारण मानिसले जुनसुकै ठाउंबाट पनि शेयरको कारोबार गर्छ, आफ्नो मोवाइलबाट खरिद विक्री गर्न सक्छ । त्यसले गर्दा हिजो केही सय संख्यामा शेयरको कारोबार गर्ने मान्छे थिए, अहिले लाखौंको संख्यामा पुगेका छन् ।
अहिले बजारमा देखिएको उछाल कत्तिको टिकाउ हुने देख्नुभएको छ ?
-पूंजी बजारमा तलमाथि भैरहनु नौलो कुरा होइन, घटबढ भैरहन्छ । त्यसमाथि नेपालको शेयर बजारमा त चक्रिय प्रभाव पनि रहन्छ । मौसम जस्तै चक्र अनुसार शेयर बजार पनि घुमरहन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । त्यो अनुसार अहिले जसरी निरन्तर बढिरहेको छ, सधैभरि त्यही रफ्तार रहने भन्ने त हुंदैन । तर, एकदमै तल झर्ने अवस्था पनि देखिदैन ।
अरु देशमा राजनीतिक घटनाक्रमहरुको असर पूंजी बजारमा निकै पर्छ, तर नेपालमा भने त्यति पर्दैन । के कारणले यस्तो भएको हो ?
-राजनीतिक घटना क्रमको असर नेपालको पूंजी बजारमा पनि पर्छ, तर निकै क्षणिक मात्रै । प्रतिनिधि सभा पुर्नगठनको दिन एक दिन ५ प्रतिशतले बजार घट्यो । अर्काे दिन फेरि उस्तै । अरुदेशमा कुनै घटना घटेपछि त्यसको छिनोफानो नहुंदासम्म शेयर बजारमा असर परिरहन्छ । हाम्रोमा चांही मानिसहरुले सबैकुरालाई सामान्यरुपमा लिने भएर हो कि, अति क्षणिकरुपमा मात्रै त्यस्तो असर पर्छ ।
विगतमा पूंजी बजार ४, ५ जना टाइकुनहरुको कब्जामा देखिन्थ्यो, उनीहरुले जे चाह्यो, त्यही हुन्थ्यो, अहिले पनि उनीहरुको दवदवा त कायमै छ नी, होइन ?
-विगतको जस्तो अवस्था त कहांबाट हुनु ? हिजो, १०, १२ करोडको कारोबार हुंदा कुनै व्यापारीले ५,६ करोड लिएर शेयर खरिद विक्री गर्न थाल्यो भने पूरै खैला बैला मच्चिन्थ्यो, उसले जुन चाह्यो त्यही कम्पनीको मूल्यमा उछाल आउंथ्यो । उसले नचाहे कारोबार नै हुन नसक्ने अवस्था थियो । अहिले त एकदिनमा ८,१० अर्बको कारोबार हुन्छ । त्यत्रो कारोबारलाई आफ्नो कब्जामा राख्न सक्ने त कोही छैन । त्यसैले हिजोको जस्तो अवस्था अहिले छैन ।
साना लगानी कर्ता र ठूला लगानीकर्ता विचको अन्तरद्धन्द्ध त कायमै छ नी, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
-म त्यो पनि मान्दिन । शेयर कारोबारमा सानो लगानी र ठूलो लगानी भन्ने हुंदैन । ठूलो लगानी कर्ता हुं, एकै पटकमा करोडौं लगानी गर्छु भन्नेले पनि थोरै थोरै शेयर किनिरहेको हुन्छ । देख्दा सामान्य खालको भए पनि कसैले धेरै कारोवार गरिरहेको हुन्छ । आज मसंग भएको शेयर बेच्छु भनेर सोंचेको बेला बजारको ट्रेण्ड हेरेर खरिद गर्नु पर्छ । कहिले किन्छु भनेर मुड बनाएको बेला बेच्नु परिरहेको हुन्छ । मैले नै पटक पटक त्यसो गरेको छु । आफ्नो मानसिकता भन्दा पनि बजारको मानसिकता हेरेर चल्नु पर्छ ।
शेयर बजार प्रतिको मानिसको हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमै समस्या छ भन्ने लाग्छ । खासमा यो अति नै अफ्ठारो व्यवसाय हो तर मानिसहरुले निकै सजिलो ठान्छन्, मुख्य समस्या नै यही हो ।
तपाई उद्योग वाणिज्य महासंघले गठन गरेको क्यापिटल मार्केट फोरमको संयोजक, त्यो फोरमले के काम गर्छ ?
-हामीले पूंजी बजारका नियामक निकाय र सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने काम गर्छाैं । आफ्नै प्रडक्ट ल्याउन त सक्दैनौं । त्यसैले यहां नेर यस्तो प्रवृत्ति अपनाउं, यो गलत भैरहेको छ, यस्लाई सच्च्याउं भनेर सरकारलाई सुझाव दिने काम हामीले गर्छाैं ।
नेपालमा आज थप १०६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १६ जनाको मृत्यु १४ मिनेट पहिले
गठबन्धनमा कुनै मतभेद छैन, अब सरकार विस्तार हुन्छ - प्रचण्ड २३ मिनेट पहिले
अल्जेरियाका पूर्व राष्ट्रपति बौटेफ्लीकाको निधन ३४ मिनेट पहिले